Maxaa ka cusub Website-kan? - BBC News Somali
Maxaa ka cusub Website-kan?
Image caption BBC Somali website
Waxa laga yaaba in aad dareentay isbeddel cusub oo ka muuqda habka farshaxanka iyo tusmooyinka boggagan cusub ee bogga BBC Somali. Ujeeddadu waa in horumarin lagu sameeyo naqshadda iyo qaabka wax looga raadsado Website-kan, maqalka iyo muuqaalkaba.
Inta badan, waxaad dareemeysaa isbeddel aad ku aragto bogagga wararku ku qoran yihiin, mararka qaar taasi waxay keeni kartaa in si isku mid ah aanay u muuqan.
Waxyaabaha aanu soo gudbino sida wararka, faalooyinka, maqalka iyo muuqaalka, intaba waad ka heli kartaa bartani.
Maxay yihiin faa'iidooyinka naqshaddan cusub?
Waxaa meel fiican loo helayaa wararka maalintaa ugu waaweyn, video iyo sawirro. Waxaannu ku dedaali doonnaa in aannu ku muujinno bogga hore wararka iyo sheekooyinka ugu waaweyn, iyo qodobada kale ee la xidhiidha.
Kala astayn cad
Si cad oo loo kala sumadeeyo, iyo in kor la soo mariyo noocyada kala duwan ee wararka oo si fudud looga heli karo bog walba.
Bogagga wararka waxaa loo qaabeeyey hab dadka soo gelayaaa ay si toos ah u heli karaan oo ay u kala xulan karaan wararka ugu muhiimsan ee bartan. Waxa kale oo aad ka heli kartaa xidhiidho kale oo meelo kale ku geynaya, kuwo si khaas ah u saamaynaa amma ugu saabsan isla sheekadaas, waxana aad ka heli kartaa adeegyadani bogga dhexdiisa ama meesha hoose.
Video Player-kan waa mid ka ballaadhan kuwii hore, waana ka tayo fiican yahay. Bogagga maqalka iyo muuqaalka, waxaa jiri doono kuwo kale oo badan.
Wixii ugu danbeeyay
bogga hore, wararka ugu danbeeyay ee la daabacay, waxaad ku arki kartaa saacaddii la daabacay, si qofku u kala garto wararka cusub ama dib loo habeeyay ee wax ku soo kordheen amma wax iska bedeleen.
Adeegyo kale ayaa dadka u oggolaanaya inay si fudud oo degdeg ah ay ula wadaagaan saaxiibbadood wararka iyo sheekooyinka bogaggani iyo baraha internetka oo ay ku jiraan Facebook iyo Twitter.